Kaaliyaha guriga - ku darista Qaybta Macaamiisha - SmartMe
Kaaliyaha Hoyga, Casharrada
Ku darista Qayb Kasta Macaamiisha Kaaliyaha Guriga
qaybta caadiga ah, qaybaha caadiga ah, ha, kaaliyaha guriga, isdhexgalka, xanniban
Maqaalka waxaan ku soo bandhigi doonaa hannaanka lagu daro is-dhexgalka aan rasmiga ahayn (Qeybta Customka) Kaaliyaha Guriga tusaale ahaan is-dhexgalka iyadoo la adeegsanayo adeegyada daruuraha eWeLink, taasna waxay keentay inaan u oggolaano inaan xakameyno aaladda Sonoff iyadoo aan la beddelin qalabkooda.
Waxaan dhowaan soo bandhignay sida loo isticmaalo IKEA Tradfri Integration. Maanta waxaan ku tusi doonaa sida loo rakibo isdhaxgalka aan rasmiga aheyn.
Kaaliyaha Hoyga, IKEA Home Smart, Casharrada
Kaaliyaha Guriga - isdhexgalka nidaamka IKEA Tradfri
ha, kaaliyaha guriga, Ikea, isdhexgalka, tradfri, guluubka
Qalabka IKEA Tradfri waxaa lagu xakameyn karaa Kaaliyaha Guriga. Waxaan u baahan doonaa isdhexgal loo yaqaan "Tradfri". Hoos, tusaalaha nalalka 'IKEA Tradfri', waxaan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo isdhexgalkaan Qaabeynta Tijaabada: Kaaliyaha Guriga ee 0.102.3, system ...
Kaaliyaha Gurigu wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo is-dhexgal rasmi ah oo la yimaada, diyaarna u ah inuu isticmaalo. Uma baahna rakibo dheeri ah iyo cusbooneysiin annaga ah - waa lala cusbooneysiiyaa nidaamka. Liistada dhammaan isku dhafka rasmiga ee hadda la heli karo waxaa laga heli karaa:
In kasta oo aruurintaas oo kale ah (hadda 1540 la kordhiyo), iyada oo loo eegayo xawaareynta horumarka adduunka ee IoT, waxaa loo baahan yahay in la abuuro isku-dhafan dheeraad ah oo ka dhex dhaca Kaaliyaha Guriga, kaliya maaha in la taageero aaladda soo socota, laakiin sidoo kale la xiriirta adeegsiga adeegyada kala duwan ee internetka, algorithm-ka, otomatiga, iwm. isku-dhafan cusub, oo aan rasmi ahayn, oo ay qoreen Community Assistant community. Waxaa loo yaqaan Qeybaha Macaamiisha. Inta badan akoonkooda iyo tilmaamadooda waxay ku yaalliin GitHub portal.
Dhexgalka aan rasmiga ahayn waxaa lagu meeleeyaa tusaha:
\_\_ degaanka \_ config \_ custom_components
halkaas oo maxaliga ah, waa tusaha guriga ee Caawiyaha Guriga. Waa inaan ilaalinaa cusboonaysiinta Qaybahayaga Macaamiisha.
Hoos waxaan ku soo bandhigi doonaa habka lagu daro isugeynta aan rasmiga aheyn ee Caawiyaha Guriga tusaalaha is dhexgalka iyadoo la adeegsanayo adeegyada daruuraha eWeLink, taasna waxay keentay in aan u ogolaano inaan xakameyno aaladda Sonoff iyadoo aan wax laga badalin qalabkooda. Waxaan ku daray barnaamijka badalka 'Sonoff T4EU1C' (oo aan lahayn dhexdhexaad USB ah) arjiga eWeLink.
Kaaliyaha Guriga 0.103.6,
Nidaamka Hass.io (Raspberry Pi 2 B),
Samba share 9.0 ama Configurator 4.2
Qalabka loo baahan yahay:
Waxay kuxirantahay Qeybta Macaamiisha gaarka ah, kiiskeena waxay noqon doontaa mid ka mid ah qalabka wareejinta Sonoff (TX T4EU1C model) oo lagu daro dalabka asalka eWeLink.
Aqoonta aasaasiga ah ee Caawiyaha Hoyga ayaa loo baahan yahay.
Is dhexgalka Sonoff
Bogga is dhexgalka ee aan adeegsan doonno waxaa laga heli karaa halkaan:
Waxaan ka soo dejineynaa faylasha lagama maarmaanka ah waxaana ka heli doonnaa tilmaamaha rakibaadda, iyo sidoo kale liistada aaladaha Sonoff ee la taageeray.
Sababtoo ah waa isku-darka adeegga eWeLink, si ay macno u sameyso, waa inaad marka ugu horeysa koonto ka sameysataa dalabka eWeLink oo aad ku darsataa aalad.
1. Soo dejiso qayb ka mid ah caadada "HASS-sonoff-ewelink"
Waxaan u galnaa degelka:
oo kala soo bixi faylka .zip faylasha loo baahan yahay. Ka dib u fura arkiifka diskiga.
2. Nuqul ka faylasha
Waxaan hubineynaa inaan rakibnay oo aan isku hagaajinay ku-darista Samba wadaag.
Waxaan galnaa faylka baarahayaasha cinwaanka soo socda:
XASSIO waa magaca shabakada Kaaliyaha Guriga ee aan dejinay qaabeynta Samba wadaag (default waa XASSIO). Waxaan sameyneynaa fayl cusub oo halkaas lagu magacaabay caadada_waxdaradaiyo gudaha gudaheeda - xanniban.
nuqul ka faylasha feylasha arkii hore aan xirxirnayn "HASS-sonoff-ewelink-master.zip".
3. Ikhtiyaari ah - Hubinta cinwaanka IP-ga ee aaladda
Qeybta Macaamiisha Sonoff waxay ka shaqeysaa mabda'a isticmaalka adeegyada internetka ee daruurtu bixiso. Xaaladda jirta markan qodobku waa mid aan loo baahnayn.
Waxay dhacdaa, si kastaba ha noqotee, in dhexgalka (rasmi ama aan ahayn) uu si toos ah ugu xirmo khadka tooska ah ee aaladda shabakaddayada. Waxaa markaa loo baahan yahay in la ogaado cinwaanka IP-ga ee aaladdaan waxaana lagu talinayaa in cinwaankaan si joogto ah loogu qoro routerkeena. Xaaladdan oo kale, akhri qodobkaan.
Waxaan hubinaa cinwaanka IP-ga ee maxalliga ah ee aaladaha la xulay ee ay taageerayaan Kaaliyaha Guriga ee router. Websaydhka 'router' ayaa badanaa ku yaal:
Had iyo jeer waad arki kartaa xariijinta aaladda magac ahaan.
Ruter-yada "Connect Box" ee UPC, marka hore weydii khadka tooska ah inaad kala soo baxdo borotokoolka IPv4 meel fog halkii aad ka heli lahayd IPv6-kii caadiga ahaa. La'aantiis, kama heli doontid sheyga ku habboon menu router-ka.
4. Qaabeynta wax ka badalida.yaml
Badanaa websaydhada 'GitHub' oo ay weheliso is dhexgalka la xushay ayaa jira tilmaame uu qoruhu si faahfaahsan u sharxayo qaybta ay tahay in lagu daro faylka qaabeynta. Qaybtan waa in lagu daraa si loo dardar galiyo is dhexgalka hore loo raray.
file qaabeynta.yaml waa la bedeli karaa, iyo kuwo kale adoo adeegsanaya isku-darka Samba wadaag iyo Qeexiyaha W Samba wadaag waxaan si toos ah u helnaa feyl, inta aan ku jirno Qeexiyaha, feylasha ayaa si aan toos ahayn looga toosiyaa tafatirka isticmaalaha Home Assistant interface. Badanaa waxaan u isticmaalaa ujeedkan Qeexiyaha.
Xulashada 1 - saamiga Samba
Kadib rakibida qalabka, faylka "qaabeynta.yaml" waa inuu ku jiraa galka:
Xulashada 2 - Qaabeeyaha
Ka dib markaad rakibto kudarta, goobaheeda waxaa ku filan in la doorto "Show in sidebar" si aad si fudud ugala soo gasho menu-ka Kaaliyaha Hoyga. Intaa waxaa dheer, waxaan dooran karnaa qaabeynta qaabeynta, wax ka beddelno iyada oo la raacayo tilmaamaha intiisa kale, oo aan keydno.
Si aad u bilowdo is dhexgalka Sonoff, ku dar qaybta soo socota faylka qaabeynta:
sonof: username: [Magaca isticmaalaha eWeLink application] password: [Password ka eWeLink application] scan_interval: 60 nimco_period: 600 api_region: 'eu' entity_prefix: Sax sax ah: Been
Dhamaan khadadka qaybta looma baahna, sharraxaad faahfaahsan ayaa laga heli karaa bogga isdhaxgalka. Hadda keydi faylka oo dib u bilow Kaaliyahaaga Guryaha.
5. Hordhac aaladaha lagu daro Sonoff
Markaad dib u bilowdo Kaaliyaha Guriga, aaladaha iswada ee Sonoff waa in laga heli karaa Hay'adaha:
Qalabka horumariyaha -> STATES
Qalabka lagu daray isku-darka Kaaliyaha Guriga wuxuu yeelan doonaa "sonoff_" bilawga asal ahaan (haddii aan si kale loogu qeexin qaabeynta.yaml). Sidaa darteed, si aad u aragto iyaga, waa ku filan tahay berrinka Ciddu bilow qoritaanka "sonoff".
6. Ku darista kaarka Kalkaaliyaha Guryaha
Liiska guud ee "Guudmarka", adoo adeegsanaya saaxir ku dhex jira ama adoo gacanta wax ku hagaajinaya, waxaan ku dari karnaa kaarka badalashada Sonoff.
Si aad u hesho kaarka sida sawirka ku jirta, faylka ku jira qaybta "aragtiyooyinka", ku dar qaybta:
aragtiyaha: - cinwaanka: Salon guddi: waddo run ah: Kaararka_view kaararka: - nooca: cinwaanka hay'adaha: Wareegyada show_header_toggle: maamullada beenta ah: - Hay'ada: yipada.sonoff_1000a68535 icon: mdi: magaca-nalka-beddelashada: 'Wareegtada'
Sonoff Mini HomeKit - gudbinta yar ee iftiinka iyo inbadan!
biiro, xanniban, sonoff mini, Sonoff mini HomeKit, nalka shidida
Hagaag, maalintii ayaa timid markaan qorayo dib u eegis ku saabsan mini-ga! Waxaan iibsaday Sonoff Mini HomeKit sanad ka hor, laakiin si uun waligey fursad ugama helin inaan dib u eego. Waqtigaasi waa yimid, hase yeeshe, oo halkan ayaa loo abuuray ...
Isdhexgalka cusub ee Yale ee Philips Hue wuxuu ku siinayaa xitaa xariifnimo inaad ku soo gasho gurigaaga
isdhexgalka, filips, Phillips hue, yale, yale linus
Yale ayaa hadda ku dhawaaqday iskaashi lala yeesho PhilipsHue, oo ah hoggaamiye nalalka casriga ah. Thanks to dhexgalka, macaamiisha isticmaalaya nalalka 'PhilipsHue' oo ay weheliso Yale's 'Motus Linus® Smart Lock' oo dhan ayaa awoodi doona inay ku raaxeystaan ​​...
Kaaliyaha Gurigu ma u tartami doonaa Rasberry Pi?
hardware, kaaliyaha guriga, kaaliyaha guriga buluug, news, software
Inta badan taageerayaasha Smart Home, magacyada Kaaliyaha Guryaha iyo Rasberry Pi aad baa loo yaqaan. Ka dib oo dhan, muxuu noqon lahaa Guri Smart ah oo dhab ah la'aantiis "guddi koontarool" oo dhab ah (Waan ogahay si wanaagsan tan).
Qabow diirran? Muxuu Sonoff sensor ka fiicanyahay heerkulbeegga caadiga ah?
dareeraha heerkulka, xanniban, Zigbee
Horay ayaan ugu haystaa mid ka mid ah su'aalahaaga madaxayga: maxaad ugu iibsanaysaa "heerkulbeegga caqliga badan" haddii kuwa caadiga ay ka jaban yihiin? Waxaad ka heli kartaa jawaabta su'aashan dib u eegista hoose. Marka, ku raaxee qodobka doorka ugu weyn ...
Kubaddu way wareegsan tahay oo laba gool ayaa jira? Dib u eegida goolka Sonoff ZigBee Bridge
xanniban, sonoff Zigbee, zbbridge, Zigbee
Waxaa la gaadhay waqtigii loogu talagalay marxaladda xigta ee aan ku dhisi lahaa gurigayga casriga ah. Markan waxaan diirada saari doonaa yoolalka. Si kastaba ha noqotee, dooni mayno inaan kubbadda laadinno. Marka maxaan uga baahanahay albaabka Sonoff ZigBee? Waxaan ku sharaxnay sharciyada howlgalka albaabada sidan ...
Iridda Sonoff Zigbee oo leh software Tasmota iyo awoodeeda
iridda, kaaliyaha guriga, xanniban, Zigbee
Dhawaan SmartMe waxaad ka akhrisan kartaa qoraal ku saabsan irdaha iyo barnaamijkooda gaarka loo leeyahay ("Zigbee - waa maxay iyo irridda la doorto"), taas oo tixraacday maqaalkaygii CC2531 iyo Zigbee2MQTT. Tan iyo markii ...
Q-taabashada WiFi-ka miyey u beddelaysaa koronto galaaska Sonoff? Dib u eegis
q-taabasho, xanniban, nalka shidida
Waxay dhammaan ku bilaabmaysay ... dhibaato la aanta gurigeyga oo aan lahayn fiilo dhexdhexaad ah. Waxaan si daacad ah u qirayaa in aanan la aqoon Q-taabashada. Raadinta wareejinta WiFi, aniga waxaa hagayay qiimaha koowaad mana ahan inaan ...
Mio Qurxinta Raaxada 90 - isdhexgalka Kaaliyaha Guriga
kaaliyaha guriga, xarkaha daahyada korantada, qurxinta mio, raaxada mio qurxinta, Shelly, shelly 2.5, shellyforhass
Maqaalka waxaan ku soo bandhigi doonaa sida loogu daro Mio Decor mMotion Comfort 90 mooto korantada daahyada korantada iyo Kaaliyaha Guriga. Waxaan u isticmaali doonaa moduleka Shelly 2.5 ujeedkan. Qaybtani waxay kuxiran tahay sida aan u leennahay fiilooyinka korantada ...